Muhiimadda Ay Cayaarahu U Leeyihiin Nabadeynta Soomaaliya | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Muhiimadda Ay Cayaarahu U Leeyihiin Nabadeynta Soomaaliya
Muhiimadda Ay Cayaarahu U Leeyihiin Nabadeynta Soomaaliya
Muhiimadda ay Cayaarahu u leeyihiim nabadeynta Soomaaliya Ciyaaraha Soomaaliya ayaa waxa ay ahaayeen mid ka mida dhaqdhaqaaqyada bulsho ee suurtagaliyay in uu calanka Soomaaliyeed ka soo muuqdo fagaarayaasha caalamka, xilli uu dalku ku jiray dagaal iyo dowlad-la’aan, tan iyo billowgii sagaashamaadkii qarnigii hore.
Cayaartooy badan ayaa u dadaalayay metelidda qaranka, xilli ay dhallinyaro asaagooda ah u dagaalayeen burburinta qaranka; waxaaana ay taas caddeysay kaalinta muhiimka ah ee ay Cayaaruhu ka qaadan karaan nabadaynta dalka.
Maxamed Cabdullaahi Abubakar, oo ah xog-hayaha guud ee Xiriirka Cayaaraha Fudud ee Soomaaliya, ayaa wareysi kooban oo uu siiyay shabakadda Shaaciye, waxa uu kaga warramay dhaqdhaqaaqa cayaareed ee dalka ka socda, iyo caqabadaha hortaagan.
“Waxa aan mar kasta u dadaalnaa in aan fursad siino dhallinyarada yaryar ee leh tayada cayaareed, si ay awoodooda ugu adeegaan qaranka. Tan waxa ay meesha ka saaraysaa in awoodda dhallinyarada loo adeegsado colaad iyo xagjirnimada dalka ku faaftay.
Caqabadda ugu weyn waxa aan kala kulmaynaa kooxaha halista u arka dhaqdhaqaaqyadeenna, oo ay xagjirka marinhabaabiya dhallinyaradu ugu horreeyaan” sidaas ayuu yiri Maxamed oo hadda London u jooga ka-qeybgalka horyaalka Cayaaraha Fudud ee caalamka. Maxamed, oo caan ku ah: Maxamed Dhaaley, ayaa ugu baaqay cid kasta oo danaynaysa hormarka cayaaraha dalka, in ay gacan ka geystaan sidii lloga hortagi lahaa caqabadaha lagu curyaaminayo dadaalka socda.
Soomaaliya ayaa Cayaaraha hadda ka socda London uga qeybgalaysa cayaartoy ku tartamaya orodka 5kun ee Mitir.